FAA mahatonga ny fandosirana mankany Hawaii ho azo antoka kokoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » FAA mahatonga ny fandosirana mankany Hawaii ho azo antoka kokoa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana US • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Manitatra ny fandaharana Weather Camera ho any Hawaii ny FAA
Ireo fakantsary, izay efa napetraka ao Alaska sy Colorado, dia manatsara ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanomezana ny mpanamory horonantsary momba ny toetr'andro eo ho eo amin'ny toerana itodian'izy ireo sy ireo zotram-piaramanidina kasaina.
Manatsara ny fiarovana ny sidina sy ny fanapaha-kevitra ny mpanamory fiaramanidina ny serivisy fakantsary fakan-tsary
Ny tetik'asa Hawaii dia hametraka fitaovana fakantsary 23 manerana ny nosy
Nanangana vondrona mpiasan'ny fiaramanidina sy manam-pahaizana FAA isaky ny nosy ny FAA
The Fitondrana federaly federaly (FAA) dia manitatra serivisy fakantsary fakan-tsary toetr'andro any Hawaii hanatsara ny fiarovana ny fiaramanidina sy ny fanapaha-kevitra amin'ny fanamoriana. Ireo fakantsary, izay efa napetraka ao Alaska sy Colorado, dia manatsara ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanomezana ny mpanamory horonantsary momba ny toetrandro eo ho eo amin'ny toerana alehany sy ny zotram-piaramanidina kasaina hatao.
The Hawaii tetikasa hametraka fakan-tsary miisa 23 manerana ny nosy. Ny FAA dia nahavita ny fanadihadiana momba ny injeniera sy ny fisafidianana ny tranokala tao Kauai, Lanai, Maui ary Molokai, ary hanomboka ny fanadihadiana any Oahu sy Big Island amin'ny volana martsa 2021.
Ny FAA dia mikasa ny hanomboka ny fametrahana fakan-tsary any Kauai amin'ny volana martsa ary hifindra any amin'ireo nosy hafa rehefa mamolavola drafitra injeniera ny maso ivoho, mahazo fampanofana sy fahazoan-dàlana ary mahazo ireo fitaovana ireo. Manantena ny maso ny sary fa avy amin'ny fakantsary fakan-tsary any Kauai dia ho hita ao amin'ny tranokalan'ny fakantsary momba ny toetr'andro amin'ny tapaky 2021
Ny FAA dia nametraka vondron'orinasa mpiasan'ny fiaramanidina sy manam-pahaizana FAA isaky ny nosy hamantatra ny toerana voalohany hametrahana fakan-tsary ary hiantohana ny fifandraisana matanjaka eo amin'ny mpanamory sy ny maso ivoho momba ny fivoaran'ny tetikasa. Ny FAA dia mametraka ny toera-misy eo amin'ny zotram-sidina sy ny toerana misy ny toetr'andro matetika ary manelingelina ny fiasan'ny sidina.
Nahomby nandritra ny 20 taona ny fakantsary fampiasa amin'ny toetr'andro any Alaska. Tamin'ny taon-dasa, ny FAA dia nanampy ny departemantan'ny fitaterana any Colorado hametraka programa fakan-tsary momba ny toetr'andro mba hanatsarana ny fahalalan'ny mpanamory ny toetr'andro eo ambonin'ny Rocky Mountains.
Ny Ethiopian Airlines dia manomboka miasa sidina miaraka amin'ny ...
Rivo-mahery mahery vaika manimba tanàna, maratra ...
Fanjakan'i Jamaika ao anatin'ny fizahan-tany Karaiba ary fomba iray ...